Imigomo yesevisi – Sparky Express®
Le webhusayithi iqhutshwa nguSparky X. Kuyo yonke le ngosi, amagama athi “thina”, “thina” kanye no “wethu” abhekise kuSparky X. USparky X unikeza le webhusayithi, kufaka phakathi lonke ulwazi, amathuluzi kanye nezinsizakalo ezitholakala kule sayithi kuwe, umsebenzisi, unemibandela yokwamukela kwakho yonke imibandela, imibandela, izinqubomgomo nezaziso ezichazwe lapha.
Isitolo sethu sibanjelwe kwaShopify Inc. Basinikeza ipulatifomu ye-e-commerce eku-inthanethi esivumela ukuthi sikuthengisele imikhiqizo nezinsiza zethu.
Sigcina ilungelo lokunqaba noma yiliphi i-oda osibekayo nathi. Kungenzeka, ngokwengqondo yethu kuphela, sinciphise noma sikhiphe inani elithengiwe ngumuntu ngamunye, ikhaya ngalinye noma ngomyalelo ngamunye. Le migomo ingabandakanya ama-oda afakwe noma ngaphansi kwe-akhawunti yekhasimende efanayo, ikhadi elifanayo lekhadi lesikweletu, kanye / noma ama-oda asebenzisa ikheli elifanayo lokukhokha kanye / noma lokuthumela. Uma kwenzeka senza ushintsho noma sikhansela i-oda, singase sizame ukukwazisa ngokuxhumana ne-imeyli kanye / noma ikheli lokukhokha / inombolo yocingo enikezwe ngesikhathi oda. Siphinde sinelungelo lokukhawulela noma ukuvimbela ama-oda athi, ekugwetsheni kwethu kuphela, avele abekwe ngabadayisi, abathengisi noma abahambisa.
Okuqukethwe, imikhiqizo, kanye nezinsizakalo ezitholakala ngeSevisi yethu kungafaka izinto ezivela kubantu abavela eceleni.
Uyavuma ukuthi ukuphawula kwakho ngeke kwephule noma yiliphi ilungelo lomuntu wesithathu, kufaka phakathi i-copyright, uphawu lokuthengisa, ubumfihlo, ubuntu noma omunye ilungelo lomuntu siqu noma elifanele. Uyaqhubeka uvuma ukuthi amazwana akho angeke aqukethe izinto ezimbi noma ezingekho emthethweni, ezihlambalazayo noma ezihlambalazayo, noma aqukethe noma yikuphi igciwane lekhompyutha noma enye i-malware engayithinta nganoma iyiphi indlela ukusebenza kweNsizakalo noma iyiphi iwebhusayithi ehlobene. Ungase ungasebenzisi ikheli le-imeyli elingamanga, uzenze sengathi ungomunye umuntu ngaphandle kwakho, noma mhlawumbe usikhohlise noma abantu abathintekayo mayelana nemvelaphi yanoma yikuphi ukuphawula. Wena unomthwalo wemfanelo kuphela kunoma yikuphi ukuphawula okwenzayo nokuqondile kwawo. Asithatha umthwalo wemfanelo futhi asikwenzeki ukuthi yikuphi ukuphawula okuthunyelwe nguwe noma omunye umuntu wesithathu.
Akunasimo lapho uSparky X, abaqondisi bethu, izikhulu, abasebenzi, abaxhumana nabo, ama-ejenti, osonkontileka, abaqeqeshelwa umsebenzi, abahlinzeki, abahlinzeka ngemisebenzi noma abanikezeli bamalayisense bezothweswa icala nganoma yikuphi ukulimala, ukulahleka, isimangalo, noma yikuphi okuqondile, okungaqondile, okuqondile, okujezisa, okukhethekile, noma ukulimala okulandelanayo kwanoma yiluphi uhlobo, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo inzuzo elahlekile, imali elahlekile, ukonga okulahlekile, ukulahleka kwedatha, izindleko zokubuyiselwa, noma yimuphi umonakalo ofanayo, noma ngabe kusekelwe kwinkontileka, ukuhlukunyezwa (kufaka phakathi ubudedengu), isikweletu esiqinile noma okunye, okuvela ukusebenzisa kwakho noma iyiphi insizakalo noma imiphi imikhiqizo oyitholile usebenzisa insizakalo, noma nganoma isiphi esinye isimangalo esihlobene nganoma iyiphi indlela ekusebenziseni kwakho insizakalo noma yimuphi umkhiqizo, kufaka phakathi, kepha kungagcini, kunoma yimaphi amaphutha noma ukweqiwa kunoma yikuphi okuqukethwe, noma noma ikuphi ukulahleka noma ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo olwenziwe ngenxa yokusetshenziswa kwensizakalo noma noma yikuphi okuqukethwe (noma umkhiqizo) okuthunyelwe, okudlulisiwe, noma okunye okutholakala ngale nsizakalo, noma ngabe welulekisiwe ngokungenzeka kwakho. Ngoba ezinye izifundazwe noma iziphathimandla azikuvumeli ukukhishwa noma umkhawulo wesikweletu ngokulimala okulandelanayo noma okuthe nhlo, kulawo mazwe noma ezindaweni ezithile, isikweletu sethu sizokhawulelwa ezingeni eliphakeme elivunyelwe umthetho.
Uyavuma ukuvikela, uvikele futhi ubambe iSparky X engenabungozi kanye nomzali wethu, izinkampani ezingaphansi kwethu, abaxhumana nathi, ophathina bethu, izikhulu, abaqondisi, amanxusa, osonkontileka, abanikeli bamalayisense, abanikezeli bezinsizakalo, osonkontileka abangaphansi, abahlinzeki, abaqeqeshwa kanye nabasebenzi, abangenabungozi kunoma yisiphi isimangalo noma isidingo, kufaka phakathi izimali ezifanele zabameli, ezenziwe yinoma yimuphi umuntu wesithathu ngenxa noma ngenxa yokuhlukumeza kwakho le Migomo Yesevisi noma amadokhumenti abawafaka ngereferensi, noma ukwephula kwakho noma yimuphi umthetho noma amalungelo ovela eceleni.
Le Migomo Yensizakalo nanoma iziphi izivumelwano ezihlukile lapho sikunikeza khona Izinsizakalo zizolawulwa futhi zenziwe ngokuya ngemithetho yaseCanada.
Imibuzo mayelana neMigomo Yesevisi kufanele ithunyelwe kithi ku-info@sparkyexpress.ca.